Uhlube udlubu ekhasini uRakhale ngokumataniswa kwakhe ne-Kaizer Chiefs – Journalismiziko
Home›Sport›Uhlube udlubu ekhasini uRakhale ngokumataniswa kwakhe ne-Kaizer Chiefs
Obeyisibabuli seqembu leChippa United uThabo Rakhale, 30, uyihlaba uyayihlikiza eyokuthi angase ebonakale egijima eNaturena ngesizini ezayo.
Lokhu kwahlukana inhloko nesixhanti phakathi kwakhe neChippa kuzungeza amahlebezi ngekusasa lakhe ebholeni likanobhutshuzwayo. Kanti lomdlali uthi usewashaya indiva lamahlebezi ngoba angamphazamisela izinhlelo zakhe ngekusasa.
URakhale uthe kuyamdida ukuthi abantu bakuthathaphi ukuthi usezogijima kuKaizer ngoba kusematheni ukuthi isavaliwe ukusayinisa abadlali.
“Angazi ukuthi ikusasa lingiphatheleni mina isifiso sami ukuqhubeka nokwenza engidume ngazo enkundleni,” kuqhuba lomdlali.
Uthe lenkilayitheka abhekene nayo ifana nse neyangeskhathi eshiya kuBhakabhaka ngoba waqala wadungaza ebumnyameni. Lomdlali ongowokudabuka eVanderbijlpark uveze ukuthi ukugqabuka kocu phakathi kwakhe nezikaMagebhula kwamthikameza kakhulu emqondweni.
URakhale uthe okwamanje ulindele noma yini engaqhamuka akakhathali kukuleli noma emazweni angaphandle. Ukuqinisekisile ukuthi azikho izinxoxo asabe nazo nezasePhefeni.
Lomdlali uthe ubone sekuyiskhathi esifanele sokugonyuluka ngalolu daba. URakhale uqale imidlalo engamashumi ayisithupha nesishiyagalolunye (68) kuChilli Boys kanti uvalele enethini amagoli amahlanu.
Uphinde waveza ukuthi ngonyaka wezi-2018 wagaleleka eTurkey eyokwenza inhlolokhono nelinye lamaqembu akhona. Ukuqinisekisile ukuthi bagculiseka ngendlela adlala ngayo kepha akayazi imbangela yokungamsayinisi inkontileka.
URakhale ukuqinisekisile ukuthi abathandi bebhola basazoqhubeka bembone elihlikihla noma nje engakabi nalo iqembu okwamanje.